. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: အတိတ်ရဲ့ အရောင်
သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းဆိုတာ ရင်ဘတ်ချင်း နီးစပ်သူတွေလို့ ကြားဖူး ဖတ်ဖူးပါတယ် .. သာမန်သူငယ်ချင်းပေါင်း များစွာ ရှိနိုင်ပေမယ့် တကယ်ကိုပဲ ရင်ဘတ်ချင်း နီးစပ်သူ ရာနှုန်းဘယ်လောက်များ ရှိလိမ့်မလဲ ..
တချို့ ငယ်ငယ်လေးတည်းက ခင်လာကြတယ် .. သူငယ်ချင်းကောင်းလို့ သူများတွေ အမြင်မှာ သိနေကြပေမယ့် စိတ်ထဲ အတွင်းထဲ ကြိတ်ပြီး ရန်လိုနေကြသူတွေလည်း ကြားဖူးခဲ့တာပါပဲ .. သေချာတာ တခုကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထက် တခြားသူတယောက်ကို ပိုချစ်ပါတယ်ဆိုတာ တော်တော်ကို ရှားပါးမယ့် ဖြစ်ရပ် တခုပါပဲ .. လူတိုင်း ကိုယ့် အတ္တနဲ့ ကိုယ်မို့လို့ တခြားတဦးတယောက်ကို ပိုချစ်ပါတယ်ဆိုတာ သိပ်လက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး .. မရှိဘူးလို့တော့ မဆိုလိုပါဘူး .. ရှိခဲ့ရင်လည်း တကယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ အခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်ခံစားချက်ထက်ပိုပြီး သူများကို နားလည်ပါတယ်ဆိုတာ ရှိနေနိုင်ပါဦးမလား ..
လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတာ အဖြေရခက်တဲ့ ပုစ္ဆာတပုဒ်ကို ခေါင်းခြောက်ခြောက်နဲ့ တွက်နေရသလိုပါပဲ .. အဖြေကလည်း မျိုးစုံ တွက်နည်းကလည်း မျိုးစုံ .. အနီးစပ်ဆုံး မှန်ကန်အောင် ကြိုးစား အဖြေထုတ်ရပါတယ် .. အဖြေမှန်ချင်လည်း မှန်မယ် .. မှားသွားတဲ့အခါလည်း ရှိတယ် .. ဒါပေမယ့် နီးစပ်အောင်တော့ ကြိုးစားနေပါတယ် ..
လူတွေကို စိတ်နှစ် မပေါင်းတတ်တဲ့ ကျမအတွက် ဘယ်သူတဦးတယောက်ကမှ ကျမရဲ့ မရှိမဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ် မဖြစ်ခဲ့ဘူးဘူး ..
လူတွေကို ရင်မဖွင့်တတ်တဲ့ ကျမအတွက် ဘယ်သူတဦးတယောက်ကမှ ကျမရဲ့ ရင်ဖွင့်ဖော် မဖြစ်ခဲ့ဘူးဘူး ..
လူတွေကို မယုံကြည်တဲ့အတွက် အဆိပ်အတောက် ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုရင်တောင် သာမန် ဆေးမြီးတိုနဲ့ ကုလို့ရလောက်တဲ့ အဆင့်ပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ..
လူတွေကို ယုံကြည်မိလို့ အဆိပ်ခတ် ခံရရင်တော့ သေရာပါ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် ..
ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်က သံသယများတတ်လို့ ဒါဟာ မဖြစ်သင့်ဘူး ပြောလာခဲ့ရင် ယုံကြည်မိလို့ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အဖြစ်ကို ဘယ်သူ တာဝန်ယူနိုင်လဲ မေးကြည့်ချင်ပါတယ် ..
အချိန်နဲ့ အမျှ ပြောင်းလဲနေတဲ့ လောက လူတွေရဲ့ စိတ်အခြေအနေတွေကြောင့်သာ ကျမ လူတွေကို မယုံကြည်ဖြစ်တော့တာပါ .. ဒါဟာလည်း ဘယ်သူ့မှတော့ ထိခိုက်လိမ့်မယ် မထင်မိပါဘူး .. ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့ ကိုယ် ကိုယ်ပိုင် ရပ်တည်နိုင်ခွင့် လူတိုင်းမှာ ရှိကြတာပဲမဟုတ်လား ..
လူတိုင်းနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပေါင်းတတ်လို့ ခင်ကြတယ်တဲ့ ..
ကျမ သူငယ်ချင်းတွေ ပေါင်းတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ စိတ်ကို သိနိုင်ဖို့ သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားမိတယ် .. သူဘာလိုလဲ သိနေမိလို့ ကိုယ်ပေးတာလဲ သူနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်သွားတတ်တယ် .. သူတို့ ခံစားရသမျှ နားထောင်ပေးတတ်တော့လည်း ကိုယ်ဟာ သူတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းတဲ့လေ .. ကိုယ်က သူတို့ လိုတာ မပေးနိုင်တော့တဲ့ အခါ .. ကိုယ့်မှာ သူတို့ ခံစားချက်တွေ နားထောင်ပေးဖို့ အခြေအနေ မပေးတဲ့အခါ .. ကျမ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်တဲ့ .. ထားပါတော့ ကျမ ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ပဲ ..
လူတွေက အတ္တများတယ် .. ကိုယ်ကသာ လိုချင်တတ်ကြတယ် .. ကိုယ်က စပေးနိုင်ဖို့ မေ့နေတတ်ကြတယ် ..
ကျမရော .. ကျမမှာလည်း အတ္တနဲ့မို့ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကြောင့် တခြားလူဘယ်လို ဖြစ်သွားမလဲ မစဉ်းစားပေးချင်တော့ပါဘူး ..
အဖြေ တခုတော့ ရှိလိမ့်မယ်
ရေးသားသူ မိုးခါး at 7/25/2009 02:54:00 AM